शरणार्थी सहायता गर्न कारबाही | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरणार्थी कसरी मदत गर्न सिक्न.
तपाईं कसरी संलग्न गर्न सक्छन्
हाम्रो स्वयंसेवकहरु ज्यादातर टाढैबाट काम. स्वयंसेवक हाम्रो सामग्री निर्माण मा एक विशाल भूमिका निर्वाह, हाम्रो स्रोतहरू अनुवाद मदत, र शरणार्थी केन्द्र अनलाइन बारेमा शब्द फैलाउने. कसरी स्वयंसेवक सिक्न.
तपाईं सफल समायोजनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को एक प्रदान मद्दत गरेर शरणार्थी जीवनमा फरक बनाउन सक्छ: राम्रो जानकारी पहुँच. अब एक दान बनाउन.
एक स्वागत शर्ट किन्न
तपाईं आफ्नो समुदाय बाहिर हुँदा स्वागत सन्देश लगाउने! हाम्रो शर्ट को एक खरीद. यो शर्ट सन्देश पठाउन, सीधा शरणार्थी र आप्रवासी गर्न: “स्वागत. यो तपाईंको घर हो, धेरै।” यो शर्ट आठ भाषामा उपलब्ध छन्. अब एक शर्ट किन्न – आगम हाम्रो काम समर्थन.
को RCO बारेमा शब्द फैलाउन
आफ्नो समुदायमा संगठन र व्यक्तिहरूले हाम्रो वेबसाइट बारेमा थाहा हुन सक्छ छैन हाम्रो निःशुल्क वेबसाइट साझेदारी. तपाईं शरणार्थी सुनिश्चित गर्न आफ्नो स्थानीय समुदायमा वितरण गर्न आउटरिच सामाग्री अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र आप्रवासी therefugeecenter.org बारेमा थाहा. अनुरोध अब सामाग्री.
तपाईं शरणार्थी कसरी स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ
शरणार्थी कसरी स्वागत गर्न सिक्न
तपाईं शरणार्थी स्वागत गर्न मद्दत गर्न आठ सुझावहरू. तपाईं आफ्नो समुदायमा शरणार्थी र आप्रवासी संग सीधा स्वयंसेवक गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंले अझै पनि लागि वकिल र प्रत्यक्ष सेवा काम बिना शरणार्थी समर्थन गर्न सक्छौं.
हाम्रो निःशुल्क पाठ्यक्रम लिन
एक सांस्कृतिक योग्य तरिका शरणार्थी र आप्रवासी कसरी अन्तरक्रिया सिक्न.
शरणार्थी र आप्रवासी हाम्रो समुदाय राम्रो बनाउन. हाम्रो देशमा शरणार्थी र आप्रवासी समुदाय नेताहरूले पढ्न.
बारेमा दैनिक अमेरिका देखि कथाहरू पढ्न किन शरणार्थी र आप्रवासी राम्रो आफ्नो जीवन बनाउन. अब हाम्रो विश्व शरणार्थी दिवस कथाहरू पढ्न.
हाम्रो ब्लग पढ्न
अध्यागमन नीति महत्वपूर्ण परिवर्तन अपडेट राखन. कौशल र सुझावहरू स्वागत गर्न र समर्थन शरणार्थी र आप्रवासी सिक्न. बाध्य विस्थापन को क्षेत्र मा अभिनव नयाँ Happenings बारेमा जान्न. अब हाम्रो ब्लग पढ्न.
शरणार्थी र आप्रवासी सिकाउने
तपाईं आफ्नो कक्षा मा शरणार्थी र आप्रवासी विद्यार्थी छन्? तपाईंले यी विद्यार्थीहरू सफल कसरी मदत गर्न सक्छ सिक्न.
यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन के छ?
हामी एक 501(ग)3 नाफारहित संगठन. हामी संयुक्त राज्य अमेरिका भरि newcomers हजारौं पुग्न प्रविधिको प्रयोग. हाम्रो मोडेल बारेमा थप जान्न.
मिशन, दृष्टि, मान
हाम्रो मिशन शरणार्थी र आप्रवासी प्रविधि प्रयोग गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका मा नयाँ जीवन निर्माण गर्न मद्दत छ. हाम्रो मान र दर्शन बारे जान्न.
वार्षिक प्रतिवेदन र वित्तीय
हाम्रो हाल वार्षिक रिपोर्टहरू पढ्न र हाम्रो प्रभाव सिक्न. हाम्रो वित्तीय समीक्षा. हाम्रो वार्षिक रिपोर्टहरू जाने.
एक नव आगन्तुक को जीवन मा फरक बनाउन
RCO संग स्वयंसेवक
आफ्नो समुदायमा स्वागत शरणार्थी
यस शरणार्थी केन्द्र अनलाइन गर्न दान द्वारा, तपाईं प्रविधि र शिक्षा शरणार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका सफल मद्दत गर्छ कि समर्थन.
फेसबुक बाट नवीनतम
सहयोग चाहियो? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस